Imibhalo nge Paul Childs
Emuva ku-Sizzle: Indlela Abakhangisi Be-E-Commerce Bangasebenzisa Ngayo Ukudala Ukwandisa Ukubuyisela
NgoLwesine, ngoMashi 3, 2022 NgoLwesine, ngoMashi 3, 2022 Paul Childs
Izibuyekezo zobumfihlo ze-Apple zishintshe ngokuyisisekelo ukuthi abathengisi be-e-commerce benza kanjani imisebenzi yabo. Ezinyangeni kusukela kwakhishwa isibuyekezo, amaphesenti amancane kuphela abasebenzisi be-iOS akhethe ukungena ekulandeleleni izikhangiso. Ngokwesibuyekezo sakamuva sikaJuni, abanye abasebenzisi bezinhlelo zokusebenza ezingama-26% emhlabeni jikelele bavumele izinhlelo zokusebenza ukuthi zizilandelele kumadivayisi we-Apple. Lesi sibalo besiphansi kakhulu e-US ngo-16%. I-BusinessOfApps Ngaphandle kwemvume ecacile yokulandelela umsebenzi wabasebenzisi kuzo zonke izikhala zedijithali, eziningi